Shil Gaadhi oo ciidamada federaalku sababeen oo ka dhacay Jigjiga dhaawacna gaystay – Radio Daljir
Shil Gaadhi oo ciidamada federaalku sababeen oo ka dhacay Jigjiga dhaawacna gaystay
Abriil 10, 2020 6:38 g 0
Gaadhi uu raashin buux dhaafshay ayaa ku gaddoomay Jigjiga gaar ahaan xaafadda 16aad, goobta loo yaqaan Jibriga. Shilka waxaa ku dhaawacmay illaa 6 qof oo midi yahay askari. Wax dhimasho ah kama aysan dhalan shilka.
Gaddoonka gaadhiga ayaa lagu sababeeyey ciidamada federaalka ee loo yaqaano FINAASTA oo u adeegsaday rasaas nool si ay gaadhiga u joojiyaan.
Ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada federaalku ay magaalada dhexdeeda gawaadhi rasaas ku furaan oo dhowr jeer oo hore ayey sidan oo kale u rasaaseeyaan gawaadhida xamuulka, sababeyna khasaare maal iyo mid nafeed.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 213 Wararka 20402
Baraarugga Haweenka – Taxanaha 45aad (Xaawo Axmed Maxamed (dhegayso)